ထီလက်မှတ်အစောင်တိုင်းထီပေါက်ခဲ့တဲ့အထိ ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ဦးလွင်မိုး – ရှအေလငျး
ထီလက်မှတ်အစောင်တိုင်းထီပေါက်ခဲ့တဲ့အထိ ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ဦးလွင်မိုး
တခေတ်တခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး လွင်မိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီမှာ သူကိုယ်တိုင်ထိုးခဲ့တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ အကုန် ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
ဒွေး၊ ထက်ထက်မိုးဦး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ခိုင်သင်းကြည်စတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ ခေတ်ပြိုင် မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး သူတို့အားလုံးနဲ့ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး လွင်မိုးဟာ ဇာတ်ကားပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စွယ်စုံရ အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်… “ရင်ထဲက ဆောင်းရာသီ”…”ပန်းတစ်ပွင့် ဖန်ဆင်းခြင်း” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာ ဦးလွင်မိုးရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ မှာတော့ မင်းသားကြီး လွင်မိုးဟာ ထီ ၄ စောင်ထိုးခဲ့ပြီးတော့ ထိုးခဲ့တဲ့ ၄ စောင်လုံး ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ တင်ထားပါတယ်….
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ တစ်သိန်းဆုမှာ ပ-၃၇၃ နဲ့ တစ်သိန်းဆုတစ်ဆု….၅ သောင်းဆုမှာ ဌ-၃၇..ဋ-၃၇..ဓ-၃၇ နဲ့ ၃ စောင် ၁ သိန်းခွဲဆု…အားလုံးပေါင်း ၂ သိန်းခွဲ ထီပေါက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
၄ စောင်ထိုးပြီး ၄ စောင်လုံးပေါက်ခဲ့တဲ့ ဦးလွင်မိုးအတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း ဝမ်းသာနေကြပြီး သူ့ရဲ့ Post အောက်မှာ မုန့်ဖိုးတောင်းပြီး ချစ်စနိုးစနောက်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်….
ဦးလွင်မိုးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မြေးလေး Liam ကို ထိန်းရင်း အနုပညာအလုပ်တွေတခါတရံလုပ်ရင်း စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်….
တခတျေတခါက လြှမျးလြှမျးတောကျ အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီး လှငျမိုးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၇ ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီမှာ သူကိုယျတိုငျထိုးခဲ့တဲ့ ထီလကျမှတျတှေ အကုနျ ပေါကျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ….
ဒှေး၊ ထကျထကျမိုးဦး၊ နန်ဒာလှိုငျ၊ ခိုငျသငျးကွညျစတဲ့ မငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့ ခတျေပွိုငျ မငျးသားတဈလကျဖွဈပွီး သူတို့အားလုံးနဲ့ အတှဲညီညီသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီး လှငျမိုးဟာ ဇာတျကားပေါငျး မွောကျမွားစှာ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ စှယျစုံရ အကယျဒမီမြားရှငျ မငျးသားတဈဦးဖွဈပါတယျ… “ရငျထဲက ဆောငျးရာသီ”…”ပနျးတဈပှငျ့ ဖနျဆငျးခွငျး” စတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှဟော ဦးလှငျမိုးရဲ့ နာမညျကွီး ဇာတျကားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ…
ပွီးခဲ့တဲ့ ၇ ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီ မှာတော့ မငျးသားကွီး လှငျမိုးဟာ ထီ ၄ စောငျထိုးခဲ့ပွီးတော့ ထိုးခဲ့တဲ့ ၄ စောငျလုံး ပေါကျခဲ့တယျလို့ သူ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့မှာ တငျထားပါတယျ….
ဝဝေဆောဆာ ပဒသော တဈသိနျးဆုမှာ ပ-၃၇၃ နဲ့ တဈသိနျးဆုတဈဆု….၅ သောငျးဆုမှာ ဌ-၃၇..ဋ-၃၇..ဓ-၃၇ နဲ့ ၃ စောငျ ၁ သိနျးခှဲဆု…အားလုံးပေါငျး ၂ သိနျးခှဲ ထီပေါကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…
၄ စောငျထိုးပွီး ၄ စောငျလုံးပေါကျခဲ့တဲ့ ဦးလှငျမိုးအတှကျ ပရိသတျတှကေလညျး ဝမျးသာနကွေပွီး သူ့ရဲ့ Post အောကျမှာ မုနျ့ဖိုးတောငျးပွီး ခဈြစနိုးစနောကျနကွေတာကို တှရေ့ပါတယျ….
ဦးလှငျမိုးဟာ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ မွေးလေး Liam ကို ထိနျးရငျး အနုပညာအလုပျတှတေခါတရံလုပျရငျး စီးပှားရေးလုပျရငျးနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ….
၃ လသာခံမည်ဟု ခန့်မှန်းခံရသောလည်း ကင်ဆာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့သည့် အသည်းကင်ဆာရှင် ရဲ့ဖြစ်ရပ်
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို တရားခွင်မှာစစ်ဆေးမည့်ပုံစံအကြောင်း သတင်းပြန့်ကြားရေးအရာရှိပြောကြားချက်အပြည့်အစုံ
ငယ်စဉ်က အနိုင်ကျင့်ခဲ့သူကို နှစ် ၅၀ ကျော် ကြာမှ လက်စားချေသတ်ဖြတ်ခဲ့သူ
ဆရာတော်ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ ဘုရားစေတီများမှာ ဌာပနာ ထားရသည့်အကြောင်းရင်း
“တရုတ်မှာ ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့် လူ ၁၂ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၁၂၅ ဦး...
ဝါးတရာကျေးရွာတွင် အလှူရှင်တဦးတည်းမှ သိန်းပေါင်း(၅၀၀)ကျော် အကုန်အကျခံ၍...
“လူမဆန်စွာအဓမ္မကျင့်ကာသတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ချခံခဲ့ရသော သေဆုံးသူ မနှင်းကဗျာ...